အရေးပေါ်ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက် « i-Collection
Softwares & Knowledge Bank
ကိုမျက်လုံး ဘလော့မှ ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ (၃၁) ရက်နေ့ မြန်မာအင်ဖိုတက် အဆောက်အဦးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော “Socialization on Net” နည်း ပညာဟောပြောပွဲအား မူလစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပရန် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။ အထက်ပါ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော ထင်မြင်ချက်၊ သတင်းနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများအား ပွဲဖြစ်မြောက်ရန် စီစဉ်သူများ အနေနှင့် မည်သည့် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုချက်မျှ ပြုလုပ်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါ။ Seminar နှင့် ပတ်သက်သော အပြောင်းအလဲ သတင်း အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင် ပြောဆိုချက်များကို ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်သူများ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘလောဂ်များတွင် ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီစဉ်သူများ၏ ဘလောဂ်များတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည်သာ တရားဝင် ပြောဆိုချက်များ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားသော ထင်မြင် ပြောဆိုချက်များကို ပွဲစီစဉ်သူများမှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသွားနိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
Seminar နှင့် ပတ်သက်သော အပြောင်းအလဲ သတင်း အချက်အလက်များကို ဒီမှာ လည်း ၀င်ရောက် စနည်းနာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
September 3, 2008 - Posted by	ktlinn2008 | News
i – Collection
……. မင်္ဂလာပါ …….
ကျွန်တော့ရဲ့ Blog ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာသူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ Blog လေးကို အချိန်အား၊ လူအား၊ ငွေအား များစွာရင်းနှီးပြီး ရေးသားခဲ့ရသော်လည်းပဲ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူများ အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အနှစ်ခြိုက်ဆုံး Software များ၊ Freeware များ၊ Add-on များ၊ Web Site များ အပြင် ကျွန်တော် လေ့လာဖတ်ရှု မှတ်သားခဲ့သမျှ ဗဟုသုတများကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Warmly welcome to my blog page. I’m ktlinnstar. I’magraduated, single and 32 years old. I’mahardware engineer. I live in Yangon, Myanmar. I’m interested in walking, traveling, watching movies, surfing internet and reading novels.
This site contains many many items such as Softwares, Literature, Links and so on. You can free download by using these items.
Thank you for your interesting. Ktlinn2008
WINDOW XP XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)
Softwares အသုံးချ Software များ
WEBSITES စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မြန်မာ Website များ Search Engine, Tutorial, Ebook, Computer Buying, Education, Community, Music, Movie, Art & Craft, Directory, Forum, Sport & Soccer, Journal & Magazine, Chatting, Ecards, Spaces and Social Network စသည့် Website address( 78 )
SHORTCUTS Windows အသုံးဝင်တဲ့ Short-cuts key များ
EMAILING အခမဲ့ ရနိုင်သော emailလိပ်စာ (44), Email tools လိပ်စာ (7) နှင့် Miscellaneous Mail Services လိပ်စာ (22)
Gmail Gmail အတွက် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း နည်းလမ်း ၈၀
JOURNALS Computer Journal ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ မှ.. ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်္ဘာလ ထိ
Online မှာ File တွေ သိမ်းကြမလား ???
Important Facts for Laser Printer
Admin Password မေ့သွားလား
Media Converter သုံးကြည့်ရအောင်
Send To မှာ နေရာသစ်
ဘယ်လို format မျိုးဖြစ်ပါစေ
Data Recovery လုပ်ကြမယ်
Go to del.icio.us
ktlinn2008 on Alpha Zawgyi Unicode
khinzawhein on Alpha Zawgyi Unicode
tkyawthu on Admin Password မေ့သွားလား
Minn Zaw Oo on Alpha Zawgyi Unicode
kgb on Font Converter